Moodeelka dhalinyarada NAD +: waa coenzyme muhiim ah oo ku jirta caafimaadka bini-aadamka-kiimikada kiimikada ee Shangke
Molecule Youth NAD +: Waa Coenzyme Ka Ciyaar Door Muhiim ah Caafimaadka Aadanaha
Waligaa maqal Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) ama "isha dhalinyarada"? " Nafaqo sax ah iyo jimicsi, jirkaaga waxaa caadi ahaan loogu talagalay inuu yeesho dheef-shiid kiimikaad ah.
Nasiib darrose, jirro, da ’weyn iyo / ama qaab nololeed aan caafimaad qabin, jirkaagu wuxuu bilaabaa inuu la kulmo daciifnimo kaladuwan oo u muuqda wax-ku-oolnimadiisa si lama filaan ah. Heerarka nicotinamide ee hooseeya adenine dinucleotide (NAD +) ayaa ka mid ah yaraantahan, halkaasna waa meesha NAD + dheeri ah waxay ku imaaneysaa anfacaya in la xiro farqiga yaraanta, gaar ahaan kor u qaadista geedi socodka gabowga caafimaadka qaba.
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) waxaa loola jeedaa aaladda loo yaqaan 'coenzyme' oo ka kooban labada adenine iyo nicotinamide. Unug kasta oo nool wuxuu ka kooban yahay walxaha kiimikada ah, oo ah aasaaska Nikotinamide Riboside. Heerarka NAD ee jirka bini aadamka ayaa saameyn ku leh heerka uu gaarsiisan yahay da'da.
Waxaa jira laba nooc oo NAD ah, oo kala ah, nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) iyo nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) + hydrogen (H) (NADH). Kii hore wuxuu leeyahay laba elektiroonig oo dheeri ah, taasina waa waxa ka dhigaya kan dambe.
Waa maxay NAD +?
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) waa maadada loo yaqaan 'pyridine nucleotide' ee hada jirta oo aad muhiim ugu ah unug kasta oo nool. Hal-abuurka 'pyridine nucleotide' wuxuu caawiyaa habab badan oo bayooloji ah halkaasoo ay ugu adeegto isuduwaha furaha iyo sidoo kale aaladda. Hawlahaani waxaa ka mid ah wax soo saarka tamarta, dayactirka DNA caafimaadka iyo hagaajinta, isdifaaca iyo muujinta hidda-wadaha. Taasi waxay sharraxaysaa calaamadaha dib-u-noqoshada ee NAD +.
NAD + wuxuu kaloo door muhiim ah ka ciyaaraa farriinta farriinta farriinta sare iyo sidoo kale howlaha immunoregulatory.
Sida molikal-dhalinyaro NAD + ayaa loo aqoonsaday inay tahay qodob muhiim ah oo ku jira geedi socodka gabowga. Daraasado kala duwan ayaa taageeray booska in heerka NAD + ee jirka bini aadamka uu xiriir toos ah la leeyahay da 'yarta qofka. Heerarka sare ee NAD +, kuwa da'da yar ee unugyada jirka, unugyada iyo aragtida jirka oo dhan. Taasi waxay asaas u tahay NAD + gabowga oo dib u noqoshada caanka ku ah.
Dhanka kale, yaraanta NAD + waxay horseedi kartaa daal iyo cuduro kala duwan. Sidaas oo ay tahay, heerar kala duwan oo NAD ah ayaa shaki la’aan ah inay muhiim u yihiin caafimaadka qofka.
Sidee NAD + U Shaqeysaa?
Marka jirkaagu awoodi waayo inuu gaaro enzymeka caafimaadka iyo heerarka soosaarka hoormoonka, wuxuu bilaabaa inuu muujiyo arrimo caafimaad oo kala duwan sida hoos udhaca deg degga ah, arrimaha xusuusta iyo heerka fakarka oo yaraada. Tani waa sababta oo ah waxay la'dahay heerar ku filan NAD + iyo NADH oo lagu taageerayo dib u soo nooleynta caadiga ah iyo shaqada unugyada jirka.
Gaar ahaan furaha NAD + shaqo waa in lagu taageero jawaabta dheef-shiid kiimikaadka ee jirka, adoo awood u siinaya wareejinta elektaroniga laga soo diro moleekulo loona wareejiyo mid kale, iyada oo loo marayo geedi socod loo yaqaan falcelinta redox. Marka loo eego falcelinta redox, nafaqadu waxay awoodaan inay xoreeyaan tamarta lagu keydiyo isku xirnaanta oksijiinta daciifka ah.
Caadi ahaan, unugyada jirkaaga waxay u baahan yihiin tamar ka yimaada marinka dhiigga si ay ugu awood siiyaan inay qabtaan howlo dheellitiran oo kala duwan. Gaar ahaan, tamarta ay u baahan yihiin waxaa loo keydiyaa sida acids dufan iyo glucose. Marka, doorka ugu weyn ee NAD + enzyme halkan waa in la fududeeyo safarka ilaha tamarta laga soo qaado dhiigga iyo unugyada ay quseyso.
Marka aysiidhada dufanka iyo gulukoosta ay siidaayaan tamarta, NAD + enzyme waxay fududeeysaa u-socodka gaaska tamarta mitochondria si loogu beddelo tamar dheeraad ah. Haddii kale, haddii ay dhacdo yaraanta NAD +, wareejinta tamarta ee unugga ayaa la carqaladeyaa, taasna waxay keentaa yaraanshaha mitochondrial, taasoo dardar gelineysa howlaha gabowga.
Markasta oo loo yaqaan 'NADH', NAD + wuxuu awoodaa inuu sameeyo seddex molikiliin ah oo loo yaqaan 'ATP molecules'. Natiijooyinka firfircoonida ee unugyada, waxaad noqotaa mid aad u firfircoon, maskax ahaan iyo jir ahaanba, sababtoo ah NAD + waxay siisay habsocodyadaada bio-la xiriira gabowga inay ku kordhiso oksidation.
Gaar ahaan, shaqada ugu weyn ee 'NAD + waxay ku lug leedahay firfircoonida enzymes-ka mas'uul ka ah falcelinta redox ee jirka. Enzym-yadaas ayaa si wada jir ah loogu yaqaanaa 'oxidoreductases'. Waxay ka mid yihiin Sirtuin enzymes (SIRT), poly-ADP-ribose polymerases iyo cyclic ADP ribose hydrolase (CD38).
Adigoo xoogga saaraya firfircoonida Sirtuin, waxaa xusid mudan in shaqada koowaad ee enzymes sirtuin ay tahay in la tirtiro hidda - wadaha fududaynaya gabowga. Hidda-wadeyaasha waxaa ka mid ah kuwa ka qeyb qaata isku-darka dufanka iyo kaydinta, caabuqyada iyo nidaaminta sonkorta dhiigga. Si ay enzymes-ka sirtuin u gaaraan, waxay u baahan yihiin enzymesyada NAD + maadama moleekulada NAD-da ay ka caawinayaan iyaga inay ka soo saaraan kooxaha 'acetyl' ka borotiinka si wax loogu beddelo.
Sidaa darteed, kordhinta heerarka NAD + waxaa loo tarjumay tiro badan oo Sirtuins ah oo firfircoon. Tani waxay keenaysaa kordhinta neefsashada mitochondrial iyo sidoo kale kor u qaadista dareenka insulinta.
Saamaynta hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka noocan ah waxay horseedaa dib-u-dhac ku yimaadda saameynta maskaxda ee da'da, Thanks to NAD + awoodda dib-u-noqoshada. Sidoo kale, dareenka insulin ee la hagaajiyay ayaa ka caawinaya jirkaaga inuu joogteeyo heerarka sonkorta dhiigga oo ka caafimaad wanaagsan. Sidaas awgeed, unugyada jirkaagu waxay u muuqdaan kuwa da'yar oo waxay u dhaqmaan hab badan oo dhalinyaro ah, iyagoo ku siinaya guud ahaan muuqaal dhalinyaro ah sidoo kale.
Intaa waxaa sii dheer, NAD + waxaa loo aqoonsaday inuu yahay mid moodelo ah oo si weyn mas'uul uga ah soo diritaanka calaamadaha 'extracellular signaling', kaas oo aasaaska u ah isgaarsiinta unugyada iyo unugyada. Sidoo kale, waxay u shaqeysaa sidii sheeko-dareere cusub, oo gudbinta macluumaadka laga helo dareemayaasha una gudbiya unugyada firfircoon ee jilicsan.
Faa'iidooyinka / Waxqabadka NAD +
Waxaa jira dad badan Faa'iidooyinka NAD + iyo shaqooyinka ay ka mid yihiin:
1. Ka-tagida xaaladaha deg-degga la xiriira ee da'da
Faa'iidooyinka NAD + anti gabowga ayaa ah sababaha ugu waaweyn ee dadka caafimaad-qabka u raba inay u arkaan heerarkooda NAD + mid caafimaad mar walba. Markii dadku sii duqoobaan, burburadooda DNA ayaa kordha, taasina waxay keenaysaa yareynta heerarka NAD +, waxqabadka SIRT1 ayaa hoos u dhacay iyo hoos u dhaca shaqada mitochondrial. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah walaaca fekerka ee unugga, kaas oo, luqadda laymanka, macnaheedu yahay in antioxidant-ka jirka iyo xag-jiriinta xorta ah aysan is-dheellitirnayn.
Sidaas awgeed, qof gaboobay oo u nugul xaaladaha caafimaad ee kala duwan sida atherosclerosis, cudurrada wadnaha, arthritis, cataracts, sonkorowga iyo dhiig karka, iyo kuwo kale.
Nasiib wanaag, cilmi baaris fara badan ayaa muujineysa in NAD + ay bixiso unugyada jirka ee kahortagga walaaca sunta keena. Sidaa darteed, qaadashada cunnooyinka NAD +, kaabis ama qaadashada waxqabadyo kale oo horumarineed oo heerka NAD ah ayaa ka caawin kara dadka da'da ah, gaar ahaan kuwa ka weyn 50 sano jir, inay ilaashadaan caafimaad wanaagsan xitaa joogitaankooda adduunka.
Kordhinta kale ee 'NAD + waxay wanaajisaa shaqada waxayna taageertaa koritaanka mitochondria. Waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa dayactirka heerarka ATP ku filan ee unugyada, oo haddii kale ay ku xirmi laheyd gabowga horumarsan.
Sidii hore loo soo sheegay, NAD + wuxuu taageeraa awooda wax soo saarka tamarta ee mitochondria ee jirkaaga. Marka mitochondria-kaaga uusan soo saarin tamar ku filan, xubnaha muhiimka ah sida wadnaha, maskaxda, muruqyada iyo sambabbada ma awoodaan inay si wanaagsan u qabtaan taasna waxay horseedaysaa daal iyo niyad-jab.
Dhanka kale, marka jirkaagu leeyahay heerar NAD + ku filan, xubnahan ayaa awood u leh inay ku qabtaan heerar caafimaad ah sidaa darteedna waxaad dareemeysaa awood, firfircoonaan, firfircoonaan iyo maskax furan. Unug kasta oo nool wuxuu ubaahanyahay coenzyme maadama ay kor uqaadeyso wax soo saarka adenosine triphosphate.
Unugyadu waxay isticmaalaan adenosine triphosphate si ay u soo saaraan tamar ay xubnahaaga kaladuwan ugu baahan yihiin waxqabadka la doonayo. Marka jirkaagu awood yeesho, unugyadaada waxay awood u leeyihiin inay si wanaagsan ula dagaallamaan dareemada daalka guud.
3.Shaqaynta maskaxda oo la hagaajiyay
Daalku wuxuu hoos u dhigayaa shaqadaada garashada. Waxay ku dareensiineysaa inaad maskaxdaada tahay mid dagan ama daruuro leh. Si kastaba ha noqotee, waxaan horey u aragnay in NAD + ay bixiso daaweyn daal. Marka, coenzyme wuxuu sare u qaadaa shaqada maskaxdaada isagoo kicinaya wax soo saar tamar ku filan unugyada maskaxdaada, ayagoo u saamaxaya inay la dagaallamaan daalka. Natiijo ahaan, maskaxdaadu waxay noqotaa feejignaan badan isla markaana quwad leh si ay u maareeyso howlo kala duwan oo kaaga baahan inaad ka fikirto.
4.Istaraatka iska caabbinta unugyada
Hal daraasad oo looga golleeyahay samaynta saameynta NAD + ee walaaca fekerka unugyada jirka, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in Daaweynta NAD + wuxuu unugyada sheybaarka ka dhigay kuwa adkeysi badan. Dhanka kale, unugyada aan la siin NAD + ayaa ku dhacay culeyska sunta. Sidaa darteed, waxay la macno tahay in coenzyme-kaan uu kordhinayo cimriga nolosha unugyada jirkaaga, isagoo ka caawinaya jirkaaga inuu la dagaallamo noolaha cudurrada keena ee si wax ku ool ah wax ku ool ah.
5.DNA dayactir cimri dheeri ah
Nolosha maalmeedkaaga, waxaa kugu soo dhaca waxyaabo kala duwan iyo xaalado ay dhici karto inay waxyeeleeyaan DNA-gaaga. DNA-da waxyeello ayaa gaabinaysa cimrigaaga. Si kastaba ha noqotee, iyada oo la siinayo NAD + ku filan jirkaaga, koontoroojiyadan waxay fududeeyaan dayactirka dayactirka waxyeelada leh iyada oo loo qaadayo elektarooniga meelaha aagga waxyeelladu ka soo gaarto. Tani waxay ku saleysan tahay daraasado badan oo la yimid gabagabada in dib u buuxinta NAD + ay kordhiso cimriga xoolaha ama aadanaha.
6.Boqoshada hurdada iyo nidaamka cunida
Baarayaasha kala duwan ayaa ogaadey in NAD + ay saameyn weyn ku leedahay wareegga qofka ee hurdada iyo sidoo kale qaabka gaajada. Waqtiga aad caadiyan seexatid ama soo tooso iyo socodka guud ee maalintaada caadiga ah waxay kuxirantahay garaaca wadnahaaga. Sidoo kale, soosaarida hormoonnada gaajada ee jirkaaga waxaa si weyn saameyn ugu leh xarunta kiimikada.
Xiriirinta habboon ee udhaxeysa sirtuins iyo Natiijooyinka NAD + ee heysata wadnaha iyo heesaha. Haddii kale, khalkhal ku dhaca NAD + ama sirtuins wuxuu sababa laxanka caafimaad-darrada, sidaas awgeed cunno xumo iyo qaab hurdo xumo. Sidaa darteed, NAD + wuxuu u imanayaa hurdo caafimaad qabta iyo cunno joogto ah. Labadan marka la kontoroolo, way kuu fududaan doontaa inaad gaadho oo aad haysato miisaan caafimaad leh.
Adoo bixinaya dhamaan howlaha kor ku xusan, Shaki kuma jiro in NAD + uu door muhiim ah ka cayaaro caawinta dadka inay ku noolaadaan nolol caafimaad xitaa da'da da 'sii koraya.
Codsiga / Isticmaalka NAD +
1.Qarasho iyo karti xusuus
Dad badani waxay ogyihiin in xarunta dawadan kiimikada ahi ay bixiso mid dabiici ah
dib u soo celinta iyo hagaajinta dariiqooyinka neural ee maskaxda.
Ka sokow, waxay meesha ka saartaa daalka maskaxda iyo guud ahaan, sidaas darteed waxay wanaajisaa caddeynta maskaxda.
Natiijo ahaan, qofku wuxuu awoodaa inuu wax ku barto oo wax u xusuusto si hufan.
2.Thicker ciddiyaha iyo timaha
Ciddiyaha iyo timaha ayaa inta badan loo arkaa inay qeexaan quruxda qofka, gaar ahaan dumarka. Iyada oo ay ugu wacan tahay awoodda ay u leedahay inay sare u qaaddo hagaajinta DNA-ga waxyeello gaadhay, NAD + ayaa muhiim u ah ciddiyaha qaro weyn iyo timaha. Sidaas oo kale, waa xarun kimikal oo aad loogu raadinayo dadka ka walaacsan timahooda khafiifka ah iyo / ama ciddiyaha.
3.Better caafimaadkiisa maqaarka
Ku sii darida da'da dadka waxaa ku dhaca cilado maqaar ah sida gariirad, khadad fiican iyo isku-dheellitirnaan aan sinnayn. Si kastaba ha noqotee, kuwa doonaya inay diidaan calaamadaha gabowga waxay qaataan NAD + supplements, kuwaas oo si fiican ugu shaqeeya ujeeddada. The NAD + gabowga anti faa'iidada ayaa ah mid caan ah.
4.Ku hagaajinta shaqada
Markii dadku sii gaboobaan, waxay noqdaan kuwa gaagaaban oo daciif ah sababta oo ah yaraanta muruqyada oo la yimaadda da 'weyn. Si kastaba ha noqotee, kuwa helay awoodda ka hortagga gabowga ee NAD + waxay ku kabayaan si kor loogu qaado shaqadooda murqaha.
5.Baaritaanka cudurada la xiriira da'da
Intaa waxaa sii dheer, dadka ay ku yar tahay 'NAD + jirkooda sababtuna tahay da' weyn waxay raadiyaan ilo ka baxsan xarunta kiimikada si kor loogu qaado xasaanadooda. Bixinta dheeraadka ah ee enzyme-ka ayaa u oggolaanaysa jirkooda inay yeeshaan awood iska caabin adag oo ku saabsan cudurro kala duwan oo la xiriira da'da.
NAD + Qiyaasta
In kasta oo NAD + ay tahay xarun dabiici ah, haddana waa in lagu qaataa si dhexdhexaad ah. Sida laga soo xigtay wakaaladda Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA), ayaa ugu ammaansan Qaddarka NAD + ugu badnaan laba garaam maalintii. Waqtiga lagu taliyay ee daaweynta waa 7 ilaa 16 maalmood, waxay kuxirantahay taariikhda caafimaad ee isticmaale.
Natiijooyinka Dhicitaanka NAD + Heerarka
Waxaa muhiim u ah qof walba inuu hubiyo inay leeyihiin heerar NAD + ku filan. Kordhinta
Heerarka NAD + waxay muhiim u yihiin dadka la kulma yaraanta NAD +. Tani waa sababta oo ah NAD + yaraanta ayaa leh cawaaqib aan loo baahnayn oo ay ka mid yihiin:
1. Calaamadaha gabowga
Qofka dhalinyarada ah, NAD + iyo NADH waxay ku badan yihiin tiro ahaan marka loo eego heerarka laga helo dadka waaweyn. Yaraynta heerarka NAD + ee da 'waxay horseedaysaa hoos u dhigida waxqabadka SIRT1, sidaas darteedna dardargelinta dhacdooyinka calaamadaha gabowga. Xaaladda noocaas ah, habka ugu wax ku oolsan ee loo beddelo ama looga hortago calaamadahaas ayaa ah in la kordhiyo heerka NAD + jirka. Iyada oo kor loo qaadayo 'coenzyme' ayaa kicin doonta waxqabadyo badan oo SIRT1 ah, sidaas awgeedna dib-u-soo-cusbooneysiinta aragga iyo dareenka jirka.
Hypoxia waa xaalad lagu garto inay oksijiinku ku yar tahay jidhka aadanaha. Xaaladda waxay horseedaa korodh NADH iyo NAD hooseeya + waxaana lagu gartaa astaamaha sida maqaarka oo yaraada, jahawareer, garaaca wadnaha oo yaraada, neefsashada oo adkaata, dhidid iyo qufac joogto ah.
Dadka la xanuunsan hypoxia waxay ka heli karaan xasilloonida astaamaha iyagoo kordhinaya heerarkooda NAD +. Kuwa khatarta ugu weyn ku jira xaaladdu sidoo kale waxay yareyn karaan u nuglaanshahooda iyagoo kor u qaadaya heerarkooda NAD + sidoo kale.
3. Qorraxda iyo dhaawaca maqaarka
Ka baqdin gubasho ama waxyeelo maqaarka oo ka dhasha soo-gaadhista iftiinka qorraxda? NAD + iyo NADH kaa daboolay Labaduba waxay bixiyaan maqaarkaaga kahortaga qorraxda iyo sidoo kale kansarka maqaarka iyagoo qaadaya qaybaha kala duwan ee UVB iyo UVA, siday u kala horreeyaan.
Haddii aad isku aragto daal qarsoodi ah iyo daciifnimo jirka oo dhan, waxaad lahaan kartaa heerka NAD + hooseeya, sidaas darteed waxaad yareysay waxqabadka SIRT1. Xaaladda noocaas ah, kaabista NADH ama NAD + waxay yareyn kartaa astaamaha daalka iyagoo kor u qaadaya shaqada mitochondria.
5. Cudurka Metabolic
Iyada oo loo marayo firfircoonida Sirtuins, NAD + waxay hagaajineysaa shaqada hidde-wadayaasha saameeya si aan toos ahayn. Sida, dadka leh arrimaha maaraynta miisaanka sababta oo ah dheef-shiid kiimikaadka saboolka ah ayaa ku gaari kara heerarkooda miisaanka ay doonayaan NAD +. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa xalka wax ku oolka ah adiga haddii aad ka cabsaneysid inaad kordho miisaanka oo aan caafimaad qabin ama kolesterol sare LDL ay sabab u tahay xaalad dheef-shiid kiimikaad.
6. Cudurada wadnaha
Waxqabadka NAD + ee jirka wuxuu saameyn ku yeeshaa waxqabadka mitochondria, kaasoo muhiim u ah shaqeynta habboon ee wadnaha. Yaraanta xarunta kiimikada waxay dardar galin kartaa wadne joogsiga, wax aan qofna dooneynin inuu la kulmo. Marka, haddii aad leedahay heerar Nikotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) oo hooseeya, laga yaabee dhaawaca ischemia-soo-kabashada ama cudur kasta oo kale oo wadne ah, waxaad dareemi doontaa inaad fiicantahay caafimadka wadnahaaguna wuu fiicnaan doonaa markaad kordhiso soo-saarista coenzyme ee jirkaaga.
7. Dhibaatada Cagaarshowga (MS)
Xanuun ka yimaada cudurka 'sclerosis' badan? Hadday haa tahay, markaa waa inaad ka fiirsataa inaad faaqiddo faa'idooyinka budada NAD + NAD + dheeri ah qaadashada cudurka calaamadaha gargaarka.
Cudurka 'Sclerosis Multiple' waxaa lagu gartaa heerka hooseeya ee NAD + ee nidaamka difaaca halka habka dareemayaasha ay la kulmaan yaraanta isla. Kordhinta NAD + waxay yareyn doontaa yaraanta dhismaha kiimikada ee nidaamka dareemayaasha, sidaasna waxay ku wanaajineysaa calaamadahaaga MS.
8. Caafimaadka maskaxda iyo xaaladaha neerfayaasha
Haddii aad la kulanto xaalad caafimaad maskaxda ama xaalad neurodegenerative ah sida cudurka Alzheimers, cudurka Parkinson ama stroke, markaa kabidda NAD + waxay ku imaaneysaa si gacanta loogu soo celiyo caafimaadkaaga. Tani waa sababta oo ah shuruudahan ayaa sababa Yaraanta NAD +, oo hogaaminaya yareynta tamarta maskaxdaada iyo dopamine-ka. Maadaama tamarta maskaxda iyo dawada loo yaqaan 'dopamine' ay yihiin qaybaha ugu muhiimsan ee nidaamka dhimirkaaga iyo neerfahaaga, astaamahaagu way sii xumaan karaan haddii aadan helin hab lagu kordhiyo heerarkaaga NAD +.
Sidee loo Kordhiyaa NAD + Heerarka Dabiici?
1. Jimicsiga jimicsiga jirka
Markii aad sii gabowdaba, jimicsiga jirka ayaa muhiim u ah caafimaadkaaga. Marka la sameeyo jimicsi jireed oo joogto ah, awoodda jidhkaagu u leeyahay inuu soo saaro NAD + ayaa la siinayaa. Waxaad u baahan tahay tamar si aad jimicsiga u sameyso. Sidaa darteed, inta aad jimicsi badan sameyso, jirkaaga ayaa sii kordhaya tamar isagoo kicinaya wax soo saarka mitochondria badan. Sidaas awgeed, heerkaaga NAD + wuu kordhayaa si dabiici ah.
2. Soonka joogtada ah
In kasta oo soonka loo adeegsado qaab diimeed diineed, waxay sidoo kale leedahay faa'iidooyin caafimaad oo kala duwan oo la bixiyo, oo ay ku jiraan kordhinta heerarka NAD + iyo dhaqdhaqaaqa SIRT1.
3.Ka fogaanshaha soo-if baxa qorraxda oo aad u badan
Shucaaca 'ultraviolet' ee qoraxda ayaa xawaareysa da'da maqaarkaaga. Xitaa ka sii xun, soo-gaadhista xad-dhaafka ah ee qorraxdu waxay dhaawaceysaa bakhaarradii ka qaybqaatay hagaajinta unugyada maqaarka ee waxyeello gaadhay. Tani waxay keenaysaa hoos u dhac heerka NAD +. Sidaas oo kale, si looga hortago inay taasi dhacdo oo aad ka caawiso jidhkaaga sii wadidda heerka NAD + caafimaad qaba adoo iska ilaalinaya u nuglaanta badan qorraxdu mar kasta oo aad kari karto. Sidookale, ka ilaali waxyeelada qorraxda adoo ku daboolaya maqaarkaaga muraayadaha qorraxda ee tayada leh marka aad dibad aado banaanka maalin qorax leh.
4. Qaadashada NAD + dheeraad ah
In kasta oo nafaqada nafaqada leh ee isku dheeli tiran ay laf dhabar u tahay bixinta jirkeena NAD +, mararka qaarkood wax dheeri ah in la sameeyo. Gaar ahaan, dadka 50 sano jir ah waxay u baahan yihiin NAD + ka badan waxa cunto dheellitiran oo caadi ah ay bixin karaan. Xaaladdan oo kale, kaabayaasha NAD ee la keeno waxay ku yimaadaan si waxtar leh. Kaabisyadaani waxay ku yimaadaan qaab kaabsal oo way fududahay in la helo. Waxay ka kooban yihiin fiitamiin B3 (nicotinamide riboside) oo markii dambe loo beddelo NAD + jirka.
5. Hurdo kugu filan
Helitaanka hurdo ku filan maalin kasta waa hab kale oo dabiici ah oo lagu kobcinayo heerarka xarunta kiimikada ee gabowga. Nasasho wanaagsan oo hurdo leh ayaa sare u qaadda soo-saarka matooryada noolaha ee jirkaaga ku jira.
6. Qaadashada cuntada NAD +
Baarayaasha waxay ogaadeen in, nikotiinamide riboside, oo ah nooc fiitamiin B3 ah, ayaa isu beddela NAD + jirka. Farsamooyinka 'coenzymes', sida unugga uu soo saaray 'NAD +, ayaa markii dambe loo isticmaalaa habab kala duwan oo dheef-shiid kiimikaad ah kuwaas oo keenaya inuu gaabiyo ama dib ugu noqdo geedi socodka gabowga ee jirka bini-aadamka. Sidaas oo kale, cuntooyinka ay ku jiraan fitamiinkan (NAD + cuntooyinka) waxay bixin karaan kabitaan weyn oo NAD + ah.
Cunnooyinka ay kujirto nikotiinamide riboside, oo aad ku kalsoon tahay inaad ku hagaajiso heerkaaga NAD + si dabiici ah waxaa ka mid ah:
Caano caano: Cilmi baaris ayaa muujisay in litir kasta oo caano lo 'ah uu ka kooban yahay 9 μmol oo NAD + ah.
Kalluunka: qaar ka mid ah noocyada kalluunka sida tuna iyo salmon waxay hodan ku yihiin NAD +. NAD + ka kooban hal koob oo tuna waa qiyaastii 20.5mg iyo 10.1mg oo salmon ah.
Boqoshaada 'Crimini': Haddii aad qaadatid koob koob oo ah Musyroom, waxaad jidhkaaga siin jirtay 3.3mg oo NAD + ah.
Hilibka digaagga: haddii la kariyey, la dubay ama dubay, hal koob oo hilib digaag ah ayaa lagu siin doonaa 9.1mg oo NAD + ah.
Cunnada khamiirka: Khamiirka waa isha NAD + barwaaqada ah marka loo eego caanaha caanaha. Sidaa daraadeed, cuntooyinka khamiirka sida keegga iyo rootida ayaa gacan ka geysan kara buuxinta heerka NAD + ee jirkaaga. In kasta oo biirka sidoo kale u adeegi karo isha isha (coenzyme), waa in loo qaataa si dhexdhexaad ah.
Cagaarka cagaaran: Khudaarta cagaaran qaarkood ayaa waliba ah Cunnooyinka NAD + , gaar ahaan digir iyo dhir, waxay hodan ku yihiin xarunta dhalinta ee kiimikada loo yaqaan 'NAD +. Koob digir ah waxaa ku jira, 3.2mg oo NAD + halka koob oo dhir ah uu leeyahay 2mg oo xarunta ah.
Kobcinta cuntada ketogenic: Inaad kujirto cuntada keto waxay micnaheedu tahay inaad naftaada ku xaddidid cuntooyinka duxda leh laakiin kaarboon-yar. Markaad qaadatid cunnadan, jirkaagu wuxuu galayaa xaalad loo yaqaan "ketosis" oo uu ku isticmaalo dufan halkii ay ka isticmaali lahayd gulukooska tamar. Tani waxay ka dhigeysaa saamiga NAD + illaa NADH inuu kordho.
Waxyaabaha Qaar ka Dhimay NAD +
Heerarka NAD hooseeya + waxaa sababi kara arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin:
1. Cudurka daba-dheeraada
Caabuqa joogtada ah wuxuu xakameynayaa enzyme NAMPT iyo hiddo-wadaha mas'uul ka ah laxanka. Natiijo ahaan, heerarka NAD + ayaa hoos u dhacaya.
2. Rabshadaha wareegga wareega ee wareega
Soo-saarka NAD + wuxuu u baahan yahay enzyme NAMPT, gaar ahaan tallaabada ugu dambeysa ee hawsha. Sikastaba ha noqotee, goorta uu qof carqaladeeyo heesaha wareegga, hiddo-wadaha mas'uulka ka ah soo-saarka enzyme-ka waa la isku tanaasulay taasna waxaa ka dhashay, soo-saarka waxsoosaarka jirka ee 'NAD + jirka ayaa yaraanaya.
3. Qaddarka sare ee sonkorta dhiigga iyo heerarka insulinta
Marka heerarka sonkorta dhiigga iyo insulinta ay aad u kordhaan, saamiga NADH / NAD + wuu kordhayaa. Tan macnaheedu waa in qadarka NADH uu aad uga sarreeyo marka loo eego heerka NAD +.
4. Ku xadgudubka khamriga
Cilmi baaris fara badan ayaa muujisay culeyska ethanol iyada oo sababtu tahay Isticmaalka aalkolada ee daba dheeraada sababa qiyaastii 20% yareynta heerarka NAD +. Tani waa sababta oo ah khamrigu wuxuu sababa waxyeelo ku-meel-gaar ah oo wax-u-dhimaya soo-saarka 'coenzyme'.
5. Waxyeellada DNA
Marka DNA-ga si buuxda u dhaawacmo, waxaa loo baahan doonaa in ka badan molikarada PARP
in la dayactiro oo dib loo soo celiyo howlihii DNA ee burburay. Maaddaama Moleekuleyaasha ay yihiin
oo ay bixisay hay'adda NAD +, sidaa darteed waxay la macno tahay in kaqaybgalkooda oo kordhay ay suuragal noqon karto
arag wax yaraanta xarunta kiimikada ee jirka dhibbanaha.
6. Waxqabadka sirtuin hooseeya
Iyadoo la tixgelinayo in sirtuinku xukumayo qulqulka 'circaden laxanka, heerarka sirtuin-ka ee hoos u dhaca ayaa sidaas awgeed u tanaasuli kara cirbiska iyo socodka qulqulka. Sidaas awgeed, heerka NAD + wuu yaraanayaa.
Ma Jiraan Wax Dhibaatooyin Dhinacyo Kasta leh oo kusaabsan NAD +?
Xaaladaha badankood, kabidda NAD + gabi ahaanba waa badbaado. Daraasadaha aadanaha ee loo sameeyay si loo dejiyo heerka nabadgelyada ee kordhinta coenzyme ee jirka waxay muujineysaa in maalin kasta 1,000mg ilaa 2,000 mg NAD + qiyaasta maalinlaha ah aysan wax saameyn ah ku yeelan dadka.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado dhawr ah oo saamaynaya waxyeellooyin aan sahlanayn oo laga soo sheegay inay dhacaan NAD + qaadashada awgeed. Saameyntan waxaa ka mid ah lallabo, calool xanuun, madax xanuun, daal daran (daal) iyo sidoo kale shuban
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan NAD +
Budada NAD +, oo loo isticmaalo in lagu sameeyo NAD + kaabis, waa cadaan, hygroscopic iyo biyo aad u yar. Qaaciddada kiimikada ee Budada NAD + budada is C21H27N7O14P2.
Haddii aad tahay soo-saare sharciyeysan oo aad xiisaynayso budada NAD + ee NAD + soo saarista dheeriga ah, hubi inaad ka hesho ilo sumcad leh si aad uga fogaato iibsashada been abuurka. Waa inaad hubisaa inaad la macaamilayso iibiyaha aaminka ah marka aad iibsaneyso kaabista NAD +. Xusuusnow inaad si sahal ah kuugu dalban karto budada NAD + ama NAD + kaabis onlayn ah.
NAD + coenzyme waa moleekule ka ciyaara door muhiim ah caafimaadka aadanaha. Faa'iidooyinka NAD +, oo ay ka mid yihiin caafimaadka maskaxda oo ka fiican, iska caabbinta walaaca iyo hagaajinta DNA, ayaa aad uga badan waxyeelooyinka yar yar ee la xiriira kaabista coenzyme. Ka sokow, NAD + faa'iidada anti gabowga waa wax ay tahay kuwa raba inay diidaan calaamadaha gabowga waa inay diirada saaraan iyada oo loo marayo NAD + dheellitirka. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la hubiyo inaad ka hesho Nikotinamide Adenine Dinucleotide / NAD + ama xirmada NAD + oo laga helo ilo lagu kalsoonaan karo.
Anderson RM, Bitterman KJ, Wood JG, et al. Maareynta marinka NAD + Neefka Nukliyeerka ayaa dib u dhigeysa da'da gabowga iyadoo aan wax laga beddelin heerarka gobolka NAD + oo deggan. J Biol Chem. 2002 Meey 24; 277 (21): 18881-90.
Gomes AP, Qiimaha NL, Ling AJ, et al. Ka gaabinta NAD (+) ayaa kadhigaysa xaalad been abuur ah carqaladeysa isgaarsiinta nukliyeerka-mitochondrial inta lagu jiro da'da. 2013 Dec 19;155(7):1624-38.
Imai SI, Guarente L. NAD iyo sirtuins ee gabowga iyo cudurka. Isbedelada Unugga Biol.2014 Aug;24(8):464-71.
Qiimaha NL, Gomes AP, Ling AJ, et al. SIRT1 ayaa looga baahan yahay firfircoonaanta AMPK iyo saamaynta faa'iidooyinka leh resveratrol ee shaqada mitochondrial. Metap Cell. 2012 Meey 2; 15 (5): 675-90.
Satoh MS, Poirier GG, Lindahl T. NAD (+) - hagaajinta ku tiirsanaanta DNA ee waxyeellada soo gaartay unugyada aadanaha. J Biol Chem. 1993 Mar 15; 268 (8): 5480-7.
Sauve AA. NAD + iyo fitamiin B3: laga bilaabo dheef-shiid kiimikaadka iyo daawooyinka. J. Pharmacol Exp Ther. 2008 Mar;324(3):883-93.
1. Waa maxay NAD +?
2.Maxaad NAD + Shaqeysaa?
3.Waaxtarmada / Waxqabadka NAD +
4. Codsiga / Isticmaalka NAD +
5.NAD + Qiyaasta
6. Cawaaqibka dhicitaanka NAD + Heerarka
7. Sidee loo Kordhiyaa Heerarka NAD + Si Caadi ah?
8.Shaqaalaha Sababa hoos u dhaca NAD +
9.Ma Jiraan Wax Dhibaatooyin Dhinacyo Kasta leh oo kusaabsan NAD +?
10.Warbixin ku saabsan NAD +